MACLUUMAADKA YAR EE LABRADOODLE EYGA MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Labrador Retriever / Toy ama Mini Poodle Mixed Breed eyda
Duncan Mini Labradoodle markuu jiray 6 bilood— Dhogortiisa waa mid qoto dheer, casaan madow oo dhalaalaysa. Tani waa sida ugu weyn ee uu heli doono. Wuxuu ku dhow yahay jilibka.
'Miniature Labradoodle' ma ahan eey saafi ah. Badanaa waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Poodle Toy, Gabar yar ama Baaskiil Caan ah oo yar. Si kastaba ha noqotee waxaa jira laba siyaabood oo kala duwan oo ay ku kallifi karaan Mini Labradoodle.
1. Qaar ka mid ah Labradoodles-ka Yar-yar ayaa loo soo saarayaa sidii iskutallaabtii ugu horreysay ee u dhexeysa Labrador Retriever iyo P Mini oo Yaryar. Qaarkood waxay leeyihiin Toy Labradoodles. Labadan cabbir ee yar yar ee Labradoodles waxaa lagu gaaraa mararka qaarkood ficil-celinta qalliinka ama bacriminta macmalka ah, laakiin maahan dhammaan kuwa wax soo saara inay sameeyaan habkan taranka. Eeyaha soo baxay ayaa laga yaabaa ama laga yaabee inay yar yihiin cabir ahaan. Aragtidu waxay tahay inay u dhexeeyaan inta u dhexeysa cabbirka Yaryar ee Poodle iyo cabbirka Labrador Retriever.
2. Bixiyeyaasha qaarkood ayaa soo saara Labradoodle aad uga yar iyaga oo ku daraya nooc saddexaad. Marka ugu horeysa ee hoos loo dhigo labka dheddig ee labrador Retriever, qaar ka mid ah kuwa wax soo saara ayaa ka gudbay Labrador Retriever iyagoo wata Cocker Spaniel si ay u soo saaraan eey yar. Kadib waxay qaadanayaan Labrador / Cocker dumar ah oo ay ku lafa gurayaan Poodle Guntin, ama taranka dabiiciga ah ama qalliinka / abuurka macmalka ah. Eydu waa ood Poodle, ¼ Labrador Retriever, ¼ Cocker.
Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah in laga fiiriyo dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha lagu arko nooc kasta. Weydii soosaaraha aad la xiriirto nooca taranta ee ay ku soo saari jireen Mini Labradoodle. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Heer: Dheddigga Miisaanka 45 - 60 rodol (20 - 27 kg) Lab 55 - 77 rodol (25 - 35 kg)
Yar: Miisaanka 30 - 50 rodol (14 - 25 kg) Ragga oo ka weyn dumarka.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo ay u soo saaraan Labradoodles.
F1 = 50% Labrador iyo 50% Poodle: Kani waa Shaybaarka to Poodle iskutallaabta kani waa jiilkii ugu horeeyey, oo dhaliya caruur caafimaad qaba! Nooca timuhu wuxuu noqon karaa mid jilicsan sida Shaybaarka, wiry sida Irish Wolfhound ama wavy / shaggy way daadin karaan ama kuma daadin karaan arday isku qashin ah way kala duwanaan karaan. Tani ma aha iskutallaabta ugu fiican ee dadka xasaasiyad daran qaba.
F1-B = 25% Labrador Retriever iyo 75% Poodle (F1 Labradoodle iyo Poodle iskutallaabta): Kani waa Labradoodle oo dib loogu soo celiyey Poodle wavy curly shaggy muuqaal muuqaalkiisu aad u waafaqsan yahay noocyada jaakadaha. F1B ayaa ah midka ugu badan ee u muuqda mid aan daadin oo xasaasiyad ka roon DIYAARINTA KASTA waana jaakadda ugu fudud ee la daryeelo.
Macluumaadka Labradoodle ee Heerka ah
'Kuwani waa saddex sheybaarro yaryar ah, oo matalaya saddexda nooc ee dharka. Bailey, dhanka bidix, waa Labradoodle noocyo badan leh oo leh jaakad dhogorta leh. Bailey waa 9 bilood jir waana eey cajaa’ib leh - caqli badan, fudud oo la tababaro oo aad u jecel oo ciyaar badan. Dhogortiisa ayaa si raaxo leh u jilicsan! Hawi, dhexda, waa jiilkii ugu horreeyay Labradoodle oo qaba timo timo. Hawi waa 5 jir aadna u deggan (marka laga reebo inuu jecel yahay inuu ku ordo oo ku ciyaaro beerta nasashada!), Iyo caqli badan-wuxuu bartay inuu hindhiso amar! Cooper, dhinaca midig, waa Labradoodle kale oo badan oo leh jaakad dhogor ah. Cooper waa eeyga ugu daacadsan, jecel inuu salaaxo oo jecel inuu ciyaaro iyo inuu ordo. Isaga oo curlsado giraanta waa cajiib! Dhamaan seddexduba waxay leeyihiin shaqsiyaad aad ufiican, daadinta oo aad uyar, waana xayawaan rabaayado ah. Dhammaan noocyada eyga waxaa qaabeeyey oo naqshadeeyey bini-aadamka ... eygayaga ayaa hadda uun la soo saaray. Oo aan lahayn ur eyga leh! Maxaad kaloo weydiisan kartaa? - Waalidiinta kibirka badan, Xagaaga & Matt, Ashley & Tim, iyo Liz & Brian, oo dhammaantood ka soo jeeda deegaanka Seattle.
Pita at 4 ½months old - Pita waa F1b lab Mini Labradoodle (25% Lab 75% Poodle Mini). Miisaankiisa qaangaarka ah ayaa la filayaa inuu noqdo 20 illaa 25 rodol. Lahaanshaha sawirka Burr Oaks Dood Ranch
Litter-ka F1 Mini Labradoodles maadaama ay korayaan. Waxay yihiin iskutallaab 50/50 ah oo dheddig ah 37-rodol Shaybaarka Elly May iyo Pierre, waa 47-rodol lab ah Poodle-ka caadiga ah . Lahaanshaha sawirka Burr Oaks Dood Ranch
F1 Mini Labradoodle eey, iskutallaab 50/50 oo dheddig ah 37-rodol Shaybaarka Elly May iyo Pierre, waa 47-rodol lab ah Poodle-ka caadiga ah . Lahaanshaha sawirka Burr Oaks Dood Ranch
Yar yar yar Labradoodle waa F1b-25% Lab iyo 75% Mini Poodle. Lahaanshaha sawirka Burr Oaks Dood Ranch
Jeb makhaayada midabbada leh ee F1 Mini Labradoodle hal sano jir
Murphy the Mini Labradoodle at 6 sano jir ka dib markii dharkiisa loo hagaajiyay gaaban
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah 'Miniature Labradoodle'
Sawirada yar-yar ee Labradoodle 1
Liiska eeyaha Toy Poodle Mix brewed
Liiska eeyaha Yaryar ee Poodle Mix
Liistada eeyaha Labrador ee Cunista Khaaska ah
shiinaha tzu puppy puppy
shaqaalaha terberiga terier iyo isku darka shaybaarka
qasnad spaniel qas qas retriever dahabka